शरीरलाई फाइदा जनक तरकारी स्कुस कस्तो फाइदा छ हेर्नुस ! - krishipost.com
१. पोषक तत्वको धनी स्कुसको सबैभन्दा ठूलो गुन भनेको यो तरकारी पोषक तत्वले धनी तरकारी हो । किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका भिटामिन, खनिज, र फाइबरहरू पाउन सकिन्छ । जुन हाम्रो शरीरको लागि अत्यावश्यक छ । जस्तै, एउटा २०० ग्रा’मको स्कुसमा निम्नलिखित पोषकतत्व पाइन्छ । क्यालोरी – ३९ कार्बाेहाइड्रेड – ९ ग्रा’म प्रो’टिन – २ ग्राम भिटामिन सी –२६ प्रतिशत क’पर – १२ प्रतिशत पोटासियम – ७ प्रतिशत म्याग्नेसियम – ५ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ । यस्तो खाले पोषक तत्वका साथसाथै स्कुसमा कम क्यालोरी, फ्याट, सोडियम र कार्बाेहाइड्रेड हुने गर्छ । त्यस्तै, शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि यो सहायक सिद्ध हुन्छ ।
२. एन्टिअक्सिडन्टको उपलब्धता स्कुसका धेरै फाइदाहरू छन् । यसलाई शरीरमा चाहिने एन्टिअक्सिडेन्टको प्रचु’रताका कारण पनि अतिगुनिलो तरकारीको रूपमा मान्ने गरिन्छ । एन्टिअक्सिडेन्ट विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थहरूमा पाइन्छ, जसले हाम्रो शरीरको तन्तुहरूमा हुने असरबाट बचाउँछ भने यसले शरीरभित्र हुन सक्ने तनावलाई पनि कम गर्ने गर्छ ।यिनीहरूमध्ये स्कुसमा माइरिसेटिन सबैभन्दा अधिक मात्रामा पाइन्छ । विभिन्न अनुसन्धान अनुसार मा’इरिसेटिन क्यान्सरप्रति’रोधी छ साथै यसले मधुमेह र जलन पनि कम गर्छ । स्कुस भिटामिन सीको एउटा उत्कृष्ट स्रोत हो, जुन हाम्रो शरीरको लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।
३. मुटुको स्वा’स्थ्यका लागि स्कुस धेरै खाने मान्छेमा मु’टुरो’गको जो’खिम कम हुने गर्छ । जस्तै, उच्च र’क्तचाप, उच्च को’लेस्ट्रोल र र’क्तप्रवाहमा पनि यसले सहयोग गर्ने गर्छ । ज’नावर र टेस्ट’ट्युबमा गरिएको अनुसन्धानले र’क्तनलीहरूलाई स्व’स्थ बनाउन मद्दत गरेको भेटिएको छ । यसले र’क्त प्रवाहमा सुधार ल्याउने एवं र’क्तचाप घ’टाउन मद्धत गर्छ । यसबाहेक स्कु’स फा’इबरको राम्रो स्रोत हो । २०० ग्राम स्कु’समा शरीरमा चाहिने कुल फा’इबरको १५ प्रतिशत आरडीआई प्राप्त गर्न सकिने बताइन्छ । फाइबर युक्त खाद्य पदार्थको उच्च सेवनले मु’टु रो’गको जोखिम घ’टाएको छ ।
४. रगतमा हुने गुलियो प’दार्थको नियन्त्रणमा सहयोगी घु’लनशील फा’इबरले शरीरको पाचन प्रणाली र कार्बाे’हाइड्रेडको अव’शोषणलाई सुस्त बनाउँछ, जसले र’गतमा चिनीको मात्रामा कमी ल्याउँछ । स्कुसले इ’न्सुलिनलाई प्रभावित गरेर र’गत हुने चिनीको मात्रा नि’यन्त्रणमा सहयोग पु¥याउँछ ।
५. स्वस्थ ग’र्भावस्थालाई सहयोग गर्ने स्कुसको नियमित से’वनले स्व’स्थ ग’र्भावस्थालाई सहयोग गर्न मद्धत गर्छ । फो’लेट वा भि’टामिन बी सबै व्यक्तिको लागि आवश्यक छ । तर ग’र्भवती वा ग’र्भाधान संस्कारको तयारीमा रहेकाहरूको लागि यो झनै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले यस्ता मान्छेको लागि पनि स्कुसको सेवन फाइदाजनक मानिन्छ । प्रारम्भिक ग’र्भावस्थामा, भ्रु’णबाट म’स्तिष्क र मे’रुदण्डको उचित विकासका लागि फो’लेट आवश्यक हुन्छ । पर्याप्त फो’लेट सेवनले बच्चाको म’स्तिष्क विकास र सकुशल जन्ममा समेत मद्धत गर्छ । २०० ग्रामको एउटा स्कुसले श’रीरमा चाहिने फोलेट र भिटामिन बीको ५० प्रतिशत माग पूरा गर्ने गर्र्छ । यसैले, सन्तुलित आहारको एक भागको रूपमा स्कुस खानु स्वस्थ ग’र्भावस्थाको लागि उत्तम हुन्छ ।
७. बुढेसकालमा हुने दृष्टिदोष कम गर्न फ्रि रेडिकल भन्ने एउटा मुख्य सिद्धान्त हुन्छ । जसले शरीरका विभिन्न कोषहरूमा क्षति पु¥याएर उमेर ढल्किँदै गएपछि हुने दृष्टिदोष कम गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । यसैले, भिटामिन सी पर्याप्त पाइने यो तरकारीको नियमित सेवनले बुढेसकालको दृश्य कम गर्न मद्दत गर्छ ।
८ मिर्गाैलाको कामलाई सहज बनाउन फ्याटी लिभर डिजिज भनेको एउटा यस्तो स’मस्या हो जसमा अत्यधिक बोसो क’लेजो छेउमा जम्मा हुन्छ । क’लेजोमा जमेको धेरै बो’सोले यसलाई ठीकसँग काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यसरी नियमित स्कुसको सेवन गर्दा क’लेजोमा बोसो जम्ने कामलाई यसले नि’यन्त्रण गर्न सक्छ । मुसामा गरिएको अध्ययनले पनि स्कुस खुवाएको मुसामा कोलेस्ट्रोल र फ्या’ट्टी ए’सिडको मात्रा कम पाइएको थियो । तर यसमा यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ कि स्कुसले मान्छेको कलेजो स्वास्थ्यमा कसरी सहयोग पु¥याउँछ ?
९ स्वस्थ रूपमा वजन बढाउन विभिन्न अध्ययनहरूले स्कुस नियमित सेवन गर्नेमा तौल बढ्ने तर यसले मोटोपनाको कुनै स’मस्या ननिम्त्याउने समेत देखाएको छ । पछि तौल घटाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सहजै घटाउन सक्ने गरी सन्तुलित रूपमा यसले तौला बढाउन मद्धत गर्छ ।